Eyona XPE Puzzle Mat yoMvelisi kunye neFektri | Yilibao
Ukungabinetyhefu kunye nokucoceka: I-XPE Puzzle Mat yenziwe nge-foam ye-XPE ekhuselekileyo, eco-friendly kwaye ingeyiyo inetyhefu kwizinto zomntwana.
1. Izinto ezingenabungozi kunye ne-eco-friendly: I-XPE Puzzle Mat yenziwe nge-XPE foam ekhuselekileyo, eco-friendly kwaye ingekho yityhefu kumntwana.
2. Ukhuseleko: I-XPE Puzzle Mat ithambile kwaye ayityibilikisi, abantwana banokudlala kwaye bakhase ngokukhuselekileyo kuyo.
3. Ezemfundo: Kukho oonobumba, izilwanyana, amanani njl njl. Uyilo oluprintwe emethini. Uyilo oluhle kwaye luhle emethini. Ezi zilungile kwimfundo yosana.
4. Kulula ukuyicoca: I-XPE puzzle mat ayinamanzi. Ungayicoca ngendwangu emanzi, kulula ukuyicoca.
5. yomelele ngakumbi kwaye yomelele: XPE iphazili mat yenziwe nge-foam ye-XPE eyomelele ngakumbi kwaye yomelele kune-EPE puzzle mat.
Ngokubanzi ejolise kubathengi, kwaye yeyona njongo yethu iphambili ekubeni ingabi kuphela komnikezeli othembekileyo, othembekileyo nothembekileyo, kodwa kunye neqabane labathengi bethu bokuhanjiswa okutsha kweChina Ixabiso eliCocekileyo leFektri Uyilo olutsha lweXP. Umgangatho we-Foam Mats, Siyakholelwa ukuba uyakonwaba ngexabiso lethu lokuthengisa, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezisombululo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo. Sinethemba lokuba unokusinika ithemba lokukunika kwaye ube liqabane lakho elifanelekileyo!
Sihlala siphucula kwaye siphucula urhwebo lwethu kunye nokulungiswa. Kwangaxeshanye, sifumana umsebenzi owenziwe ngenkuthalo ukwenza uphando kunye nenkqubela ye-100% yeFektri yaseTshayina eThayile lokuThintela amanzi elingenaManzi elingadibaniyo lokudlala iMathathu enkulu ye-XPE yePuzzle yokudlala iMat, Samkela ngokufudumeleyo abantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi ukuzingela intsebenziswano. kwaye sivelise ngomso oqaqambe ngakumbi nobalaseleyo.
100% yoqobo mveliso China Foam Floor Ukusonga Baby Dlala Mat kunye Baby Foam Dlala Mat ixabiso, Ngokusekwe kumgaqo osisikhokelo somgangatho sisitshixo kuphuhliso, siyaqhubeka sizama ukugqitha kulindelo lwabathengi bethu. Ngenxa yoko, simema ngokunyanisekileyo zonke iinkampani ezinomdla ukuba zinxibelelane nathi ngentsebenziswano yexesha elizayo, Samkela abathengi abadala nabatsha ukuba babambe izandla kunye ukuphonononga nokuphuhlisa; Ngolwazi oluthe kratya, kufuneka uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Enkosi. Izixhobo eziphambili, ulawulo olungqongqo lomgangatho, inkonzo yokuziqhelanisa nabathengi, isishwankathelo sephulo kunye nokuphuculwa kweziphene kunye namava abanzi kumzi mveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi kunye nodumo oluthi, lusibuyisele iiodolo kunye nezibonelelo. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na intengiso yethu, khumbula ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Uphando okanye undwendwele inkampani yethu zamkelekile. Sinethemba lokuqalisa ukuphumelela kunye nobambiswano lobuhlobo kunye nawe. Ungabona ezinye iinkcukacha kwiwebhusayithi yethu.
Egqithileyo Isilayidi esincinci
Okulandelayo: Iphepha lodonga le3D
Iphazili ye-Abc yeMat